बैशाख १ २०७८
विगतदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताको पक्षमा धेरै काम गरिए पनि एमाले भित्र केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल बीच विवाद चल्दै छन् ।
ओली पक्षलाई चुनौती दिँदै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले देशभरका ७७ औं जिल्लामा समानान्तर समिति गठन गरिरहेको छन् । ओली र नेपाल पक्षबीच एकताको सम्भावना सकिदै जस्तो लाग्ने हालैको दुबै समुहले विभिन्न कार्यक्रममा विरोधी तर्कहरु पेश गरेका छन् ।
नेकपा एकता कायम राख्नुको औचित्य नभएको र त्यसको सम्भावना पनि नरहेको निष्कर्ष ओली समूहले दिइसकेका छन् । के एमालेमा दुई तर्फीमै नेता, कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य सफल होला ? अब पार्टी एकता कायम रहन्छ भन्ने सोच्न पनि सकिन्न जस्तो विगतका घटनाले संकेत गरेको छ ।
माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली मिलेमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा उचाइ लिएका थिए । के एमाले एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ/छैन ? एमाले भित्र आपसीको विवाद यस्तै रहेभने कम्युनिस्ट अन्योलमा छन् । एकताका लागि गरिएका कोसिस सबै असफल हुँदै गएका छन ।